FAMPIANARANA TAFIKA MASINA - RAMANANTSOA Tovo
TOVO_HOLY_TOAVINA IRINA_TENDRY ANDRAINA_MIAMINA ARIELA TEFISOA
FAMPIANARANA TAFIKA MASINA
test 26 avril 2018
Ireo nanaiky an'i JESOA kristy ho Tompo sy mpamonjy ary Andriamanitra
HAFATRA HO an ny mpanao Politika
VINA MISIA MAZAVA MIARAKA AMIN NY FJKM ILANIVATO
Groupe D'Intérvention Spirituel du Christ (G I S C )
TOVO SY HOLY
TSIMBAZAZA 02 08 08
Batisa 14 fevr 2010
FAMPIANARANA MOMBA NY TAFIKA MASINA ANATINY
Ny Tafika Masina (TM) dia samihafa amin’ny Famangiana
Dialogues no ifanaovana fa tsy monologue
Ireo karazan’olona hilana Tafika Masina:
v -Kristiana mazoto
v -Kristiana eo ho eo
v -Kristiana malaina, tsy miangona raha tsy andro lehibe
v -Kristiana tsy hita intsony (kamo, mihemotra, lasa secte…)
v Tokony ho generaliste ny mpiantafika rehetra, tsy voatokana hitory fotsiny na hitarika fotoana fotsiny, na hivavaka fotsiny (Polyvalent).
II-ZAVATRA TAKIAN’NY TAFIKA MASINA ANATINY (Na ivelany)
Ny fahaiza-mandamina tsara sy matotra ny zavatra homanina no tena ilaina (une bonne organisation)
Misy fanamarihana (observations) ohatra: Ranaivo irery no mazoto amin’izy mianakavy.
-Apetraka ny tetik’ady
-Mivory ny tompon’andraikitra
-Maka rendez-vous matotra (19 à 20h ohatra)
-Atao ny fizarana andraikitra (repartition de tache sy itineraire)
ii)-Choix du canal na izay fantsona hitondra resaka
-Mifidy izay olona tsy manana olana amin’izay vangiana (tsy tokony ho olona manana trosa @ohatra)
-Tsy tokony ho olona mifanao ambony sy ambany amin’ny hiérarchie aminy (Caporal sy capitaine).
-Misy olona mifidy olona na mankahala olona hafa tsy ny mpitandrina ihany no tiany.
Araka izay azo atao, dia tokony avy ao am-piangonana no miainga ny mpanao TM, ary ao ihany koa no tokony hamaranan’azy, aloan’ny hodiana mba hafahana manao evaluation.
iii)-Choix du texte.
JESOA Kristy no ivon’ny TENY HO TORIANA rehetra.
-Tokony efa hisy toriteny 5 na 10 efa voahomana, fa ampiarina amin’ny toe-javamisy sisa atao.
-Fadio ny manao toriteny ara-moraly (miteniteny azy @ tokany na ny sigarany, na ny fijangajangany)
-Ny famonjen’i Kristy hatrany no toriana, ny fahasarany
-Tsy mibeny ny mpangalatra, fa mampilendalenda azy ny fitavan’i Kristy « Christo-centrique »
-Texte toute clé hazoana famonjena no fidina oh. « Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra iti.. »
iv)-Homanina ny HIRA
Maredona hain’ny rehetra.
-Mila masaka tsara daholo ny zavatra atolotra, vao afaka miroso, mba hanome AINA vaovao ho an’ny vangiana. Raha misy fifaliana miseho eo amin’ny vangiana, dia izay no taratry ny famonjena. Ny andrasana amin’ny Tafika Masina dia ny hiverenan’ny olona ao amin’I Tompo JESOA.
v)-Mila mitazona tsiambaratelo. Raha vao resaka fanambadiana, dia ny Mpitandrina no habilité, tompon’andraikitra.
II- NY DINGAN’NY TAFIKA MASINA ANATINY (TAMANA)
1-Ankapobehany (Les 6 E)
v -Enquêter (fantarina ny momba ilay olona ho vangiana), jerena ny fiche sao efa misy momba azy
v -Evangéliser (Fitoriana)
v -Edifier (mampiorina ilay olona amin’ny finoana)
v -Equiper (mandray andraikitra amin’ny fiofanana)
v -Envoyer (mba ho lasa tompon’andraikitra hiantafika ilay olona, lasa iraka mahomby, manana toe-panahy voataiza hizara, hanabe voa ny fanjakan’ny lanitra
2-Dingana Voalohany: “Fiarahabana MAFANA”
v -Aloan’ny hidirana ao an-trano (ohatra à 10m), dia mangataka ny asan’ny Fanahy Masina @ vavaka
v -Manao “HAODY” rehefa voazara tsara ny andraikitra (ny mitari-dresaka, mivavaka, mitory..)
v -Fiarahabana “mafana” (mandray tànana tsara ampitsikiana, fa tsy manao ala-safay)
v -Manao vavaka fisaorana ny FM noho ny fandraisana natao
v -Atao ny presentation, fifankalalana
v -Manao resadresaka fohy (5 à 10 mn raha be ) ho fanorenana ny fifandraisana tsara, hisian’ny fifankazahoana am-po (tsy toy ny manao enquête anefa).
v -Mihaino tsara izay resadresaka ifanaovana ny mpitory teny sy ny mivavaka, mba hampiditra izany ao anaty vavaka na toriteny (oha. Fianakaviana manana marary, na vao azom-pahoriana)
v -“Ndeha ary hiomana amin’ny fanompoampivavahana isika”, dia maka fihirana sy Baiboly ny ao an-trano. Lanjalanjaina tsara izay atao. Salamo fiderana fohifohy raisina fa tsy atao lavabe.
3-Dingana faha roa: Fanompohampivavahana fohy
v -Salamo fiderana-Hira
v -Hira adininy iray
v -Soratra Masina (Izay mitory no mamaky ny Teny): Méditation fampieritreretana no atao ( à 7mn) fa tsy toriteny lavabe
v -Asiana Appel ny farany, “antso” mba hamaliana ny antson’Andriamanitra
-Faranana amin’ny vavaka fohy
4-Dingana faha telo: Tafika Masina
v -Raisina tsirairay ny olona, ny lehilahy mandray ny lehilahy, toerana misaraka ny vehivavy mandray ny vehivavy, misy koa mandray ny ankizy, mampanao azy ireo fampianarana na tsianjery na hira.
v -Mba ho fitondrana am-bavaka manokana cas par cas ny tsirairay, araka izay zava-miseho ao an-trano. Fampihavanana ny olona tsirairay raha misy ady.
v -Koa inona no zavatra tokony hivoaka amin’izany ?
Tari-dresaka amin’ny maha Tafika Masina ny TM. Miainga amin’ny olana misy.
-Asiana vavaka sy presentation mba hisy fifamatorana eo amin’ny resaka ifanaovana.
-Fanontaniana mipetraka dia izao: Efa nandray an’I Kristy ve ilay miresaka aminao ?
-Raha ENY, dia Edification no atao
-Raha TSIA, dia Evangélisation no atao. Mety amin’ny maha olombelona azy no anaovany asa soa, ka mila taomina handray ny famonjen’I Jesoa Kristy izy.
Ø -Raha mamaly izy hoe “Mbola tsy fantatra izany” na hoe “Andriamanitra ihany no mahalala”, dia mbola tsy voavonjy izy izany; satria tokony samy hahalala izao anio izao isika rehetra hoe EFA VOAVONJY HIANAO NA TSIA.
-Tadidio fa na mpiandry aza no manoloana anao, dia tokony atao foana ny TEST.
Ho fitarihan-dresaka dia izao : “Araka ny toriteny teo dia nisy antso ho antsika..”
-Ohatra: Hianao ve ny Naivo efa nisy fotoana nahatsapanao ve fa nanapa-kevitra ny handray an’I Jesoa Kristy ho Mpanapaka ny fiainanao ve hianao ?
-Azonao antoka ve izao ankehitriny izao fa raha tonga haka anao I Kristy dia azonao antoka ve fa ho voavonjy hianao ?
-Koa sitrakao ve raha vonona hianao, ny hanapa-kevitra ho an’I Jesoa Kristy , satria vonona ny handray anao foana Izy, fa tsy noho ireo asa soa ataonao akory ny hamonjeny anao.
-Izay mino no hovonjena. Miainga amin’ny finoana ny famonjena.
-Ny fanekena fa Jesoa Kristy ho Tompo sy Mpamonjy azy dia midika fa “manana pouvoir de décision” amin’ny fiainanao Jesoa.
-Tsy maintsy raisina I Kristy satria Izy no mahavaha ny olanao. Tadidio ity daty androany ity izay nandraisanao Azy.
-Koa rehefa vonona ary I Naivo dia izao:
-1] Taritina izy hiaiky heloka, ataovy ny fanekenao ry Naivo !
-2] Mifona rehefa avy eo (noho ny fo torotoro), fa izay manafina ny fahotany tsy ambinina.
-3] Mangataha an’I Jesoa hamela ny elokao ( I Jaona 1: 8,9) « Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. » (1 Jaona 1:8) « Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra. » (1 Jaona 1:9)
-Io Jesoa io no mamela anao.
-Raisina ao am-po, amin’ny fo Jesoa, ary mangataka ny Fanahy Masina mba hiazona anao amin’izany sitraponao izany.
« Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery* ho tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [*Na: anarana, na fahefana] » (Jaona 1:12)
« Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko. » (Apokalypsy 3:20)
VITA IZAY NY DINIDINIKA
-Raha mandà ilay olona, dia ampahafantaro azy fa efa voaheloka sahady izy satria mangatak’andro, ka hoheloina.
-« Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin'izao tontolo izao hanameloka* izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. [* hitsara] » (Jaona 3:17)
v -Ampiana izy amin’ny fivelomany rehefa manana problème manokana, vokatry ny nialany tamin’ireo fomba ratsy teo aloa.(omena masom-boly ..).
v -Ny olona nandray an’ Kristy no tohanana fa tsy ny démoniaque eo ambaravaran’ny fiangonana, izay mila vola hividianana paraky, sigara na toaka. Ny atao dia ny mitaona azy handray an’i Kristy fa tsy ny mamatsy devoly hisotroana toaka.
5-Dingana faha efatra: FAMARANANA
v -Rassemblement: Antsoina miaraka ny rehetra, ny lehilahy, ny vehivavy, ny ankizy.
v -Vavaka nampianarin’I Tompo ho famehezana ny zavatra rehetra.
v -Remarque : Vavaka nampianarin’i Tompo iray ihany no atao mandritry ny fotoam-bavaka iray.
v -Veloma MAFANA (mifankatia ny zanak’Andriamanitra)
Tahaka izao ilay vavaka atao rehefa resy lahatra ny handray an’I JESOA ilay olona
JESOA KRISTY ô miaky eto anatreanao aho fa mpanota , mangataka ny rà izay nalatsakao tany KALVARY mba handio ahy mba ho afa-pahotana sy ho afa-keloka,indro vohaiko ny varavaran’ny foko ary midira ianao ato anatiko, ekeko ianao ho TOMPOKO sy MPAMONJIKO JESOA ô, soraty ao amain’ny bokin’ny fiainana ny anarako. AMEN
Retour aux articles de la catégorie Groupe D'Intérvention Spirituel du Christ (G I S C ) - Retour à tous les articles